Inkinga Ejwayelekile | Shandong Dingtaisheng Imishini Technology Co., Ltd.
IZINKINGA EZIJWAYELEKILE NEZIXAZULULO ZOKUBHEKANA NOKUVINJELWA KOKUVINJWA
Noma yiluphi uhlobo lwedivayisi luzovela phakathi nale nkinga noma leyo nkinga, inkinga ayesabeki, ukhiye uyindlela eyiyo yokuxazulula inkinga.Sezansi sethula kafushane izinkinga ezivamile nezixazululo zezindawo ezibuyela emuva eziningana.
1. Ngoba izinga lamanzi alilungile, izinga lokushisa lamanzi liphezulu noma liphansi, ukwehluleka kokuhambisa amanzi, njll., Kuyadingeka ukusebenzisa izindlela zokwelashwa ezifanele ngokuya ngezinkinga ezahlukahlukene.
2. Iringi yokufaka uphawu iyaguga, iyavuza noma yephukile. Lokhu kudinga ukuhlolwa ngokucophelela ngaphambi kokusetshenziswa nokushintshwa okufika ngesikhathi kwendandatho yokufaka uphawu. Lapho sekwenzekile ikhefu, opharetha kufanele aqhubeke ngokuqinile noma afake okunye esikhundleni salo ngaphansi kwesisekelo sokuqinisekisa ukushisa okuphephile nokucindezela.
3. Ukunqamuka kukagesi kungazelelwe noma ukucishwa kwegesi Uma uhlangabezana nalolu hlobo lwesimo, qaphela ngokucophelela isimo sokusebenza kwe-retort, wenze ukubhaliswa, bese uqedela ukuvala inzalo lapho kutholakala ukunikezwa kwempahla. Uma ukunikezwa kumiswa isikhathi eside, udinga ukukhipha imikhiqizo ekubuyiseleni bese uyayigcina, bese uqhubeka nokusebenza ngenkathi ulinde ukutholwa kokuphakelwa.